Dhoofinta Tamarta Cadceeda ee Afrika. | Somaliland Today
← UN Special Representative for Somalia condemns Mogadishu bomb attacks
Madaxweynaha Somaliland Iyo Waftigi Uu Hoggaaminaayay Oo Caawa Ka Soo Dhoofaya London Kuna Soo Wajahan Dalkii. →
Dhoofinta Tamarta Cadceeda ee Afrika.
(SLT-London)-Maalgaliyayaasha ayaa doonaya inay ka helaan lacag dowladda Britain qorshe looga soo dhoofinayo tamarta qoraxda waqooyiga Afrika.
Qorshaha ayaa 2.5 milyan guryi oo ku yaala Britain ay isticmaali karaan koronto laga dhaliyay qoraxda Tunisia sanadku markuu yahay 2018-ka.
Shirkadda maalgalinaysa ayaa sheegatay inay galisay 10 milyan oo euro dhisida saldhiga.
Qaar kamid ah shirkadaha ajnabiga ah ee soo saara tamarta ayaa ku tartamaya inay u soo dhoofiyaan tamar nadiif ah Britain sanadka 2017.
Shirkada Tunur ayaa doonaysa inay ka soo dhoofiso laba gigawattas oo tamarta cadceeda ah oo ay keento Britain, hadii ay ku guulaysato qandaraaska dowladdu ay bixinayso
Sharci cusub oo ay dowladda Ingiriisku hadda soo saartay, dowladda ayaa waxay ogolaanaysaa shirkadaha ajnabiga ah ee soo saara tamarta nadiifka ah inay ku tartamaan qandaraaska dowladda.
Shirkada Tunur ayaa soo uruurisay saddex sano xog ku saabsan qoraxda meesha tamarta laga soo saraayo.
Sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ansixiyay baarlamaanka Tunisia si loo loo soo djhoofiyo tamarta, heshiis ayaa la saxiixay si shirkad Talyaani ah loogu ogolaado inay ku xidho kaybalo badda hoosteeda ilaa saldhiga ku yaala meel u dhow magaalada Rome.
“Tani ma aha fikrad, ayuu u sheegay BBC madaxa Tunur.
“Waxaan la shaqaynaynaa shirkadaha injineerada ee ugu waawayn adduunka. Kani waa mashruuc wayn, hadana waxay leedaha khatarteeda sida khatarta ay u leeyihiin mashruucyada waawayn ee tamarta.
” Laakiin ma jiro wax ka cusub inay tamarta laga soo dhoofinayo waqooyiga Afrika ee la keenayo Yurub.”
Shirkada ayaa waxay ku doodaysaa in dhuunta gaaska ka keenta Aljeeriya ee soo marta Tunisia inay shaqaynaysay dhib la’aan markii ay dhaceen rabshadihii kacdoonkii carabta.
Qorshahooda ayaa waxaa ka mid ah inay isticamaalaan teknolajiyada tamarta qoraxda (CSP). Teknolajiyada ayaa suurtogalinaysa in la kaydiyo tamarta kadibna la qaybin karo xiliga loo baahan yahay, marka kalena la kaydin karo.
Shirkadda ayaa sheegaysa helida korontada ay tahay mid la hubo, 20% ka raqiisan tamarta dalka Britain gudahiisa laga helo sida mida dabaysha laga dhaliyo.
Si loo dhimo kharashka korontada, shirkadaha aan Britishka ahayn waxay u baahan yihiin inay ka jabnaadaan shirkadaha Britishka ah si ay u helaan qandaraaskan.